Shacabka Pakistan oo doonaya ku dhaqanka Shareecada Islaamka. | HimiloNetwork
HimiloNetwork Han & Horseed
Shacabka Pakistan oo doonaya ku dhaqanka Shareecada Islaamka.
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka April 14, 2016	0 222 Views
Islamabad, Pakistan (Himilonews) – Kumaakun dibadbaxyaal ah ayay isku dhaceen booliska gudaha caasimadda dalka Pakistan maalintii labaad dibadbax lagu dalbanayo xukunka Shareecada.
Dibadbaxyada ayaa iskugu soo ururay afaafka hore ee xarunta Barlamaanka ee dalka Pakistan iyo xarumaha kale ee dowliga ah — iyaga oo dowladda weydiisanaya inay hir-galiso ku dhaqanka Shareecada Islaamka.
In-ku-dhow 25,000 oo qof ayaa kusoo baxay jidadka waaweyn ee caasimadda si ay dowladda ugu cadaadiyaan inay hirgaliso xukunnada shareecada Islaamka salka u ah.
Waxay kaloo kasoo horjeedeen dilka loo geystay Mumtaz Qadri oo madaxa ka toogtay barasaabka gobolka Punjab ee Rawalpindi Salmaan Taseer kadib markii uu difaacay haweeney Masiixiyad aheyd oo diinta Islaamka af-lagaadeysay.
Bishii hore, ra’iisul wasaare Nawad Shariif wuxuu oggolaaday in ciidaha diimaha kale sida Hinduuga iyo Kirishtaanka ay u dabaal-degi karaan dadka reer Pakistan ee raacsan diimahaas.
Pakistan ayaa ah dal leh aqlabiyad Sunni Muslim ah kaas oo ay ku nool yihiin Muslimiinta saddexaad ee ugu badan dunida kadib Induniisiya iyo Hindiya. Waana dalalka ugu horreeya ee doonaya ku dhaqanka shareecada Islaamka, kadib afti ra’yi ururin ah oo lagu sameeyey.
Nagala soo xiriir: Himilonews@gmail.com
Previous: Gabar 20-jirad ah oo isku dayday inay is-disho kadib markii oday 69-sano jir ah oo ay jecleyd uu ku daadiyay.
Next: Cudurka Kaduudiyaha oo soo laba-kacleeyey
Robot ku jawaabaya 11 luqadood oo lagu soo kordhiyay Masjidka Xaramka ee Makka.
Shiikh iyo Baadari iskaga imaanaya kaalmeynta Darbi-jiifta Brazil.
Laacibkii Qaranka Cameron oo qaatay diinta Islaamka.
Madaxweynaha cusub iyo Mushkiladaha horyaalla.
Jamaaco Imamkooda Masjidka ku abaalmariyay Gaari Audi-6 ah.
23 April – Maalinta Caalamiga ee Afka Ingiriiska.
Daawo – Aqrisku wuxuu ugu danbeyn noqonayaa lama-huraan.
Cayaaryahanka Seedorf oo qaatay Diinta Islaamka.
Gal-hareeri: gaax aan la maalin!
Ninka – si loo helo Nabad Caalami ah – gadaal-gadaal ugu socda 25-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Akhriso : Ereyo Ama Oraahyo Jaceyl oo Xikmado badan Xumbaarsan
Wax ka baro 10-ka Dal ee Qaaradda Afrika Ugu Dhulka Weyn
Wax ka baro Fardaha
Wax ka baro Baqasha
Copyright © 2018 | Himilo Network, All Rights Reserved by Tabaarak ICT Solutions
error: Mininkeenna moogaanteen mala soo maraayo!!